सेलिब्रेटी आमाले ‘अस्तित्व नकारेको’ छोरो – Mero Film
सेलिब्रेटी आमाले ‘अस्तित्व नकारेको’ छोरो
लौ मेरो त अस्तित्व नै पो रहेन छ ! अब मामु बाबाको बिहे नै भएको छैन भने म हुनुको अर्थ के नै पो रह्यो र ? मेरो मामु वहाँ हो थाहा पाउदा पाउदै पनि मैले कहिल्यै खुलेर भन्न पाइन । तर पनि खुसि नै थिए किनकी बाबा त मै संग हुनुहुन्छ नि । वहाले मलाई मामुको कमि हुन कहिल्यै दिनु भएन । मलाइ नै भनेर आफ्नो हुर्किदै गरेको फिल्मी करियर केहि समयलाई ब्रेक नै लगाउनु भयो । एउटा बच्चाको आमा बाबु दुवै बन्न पुरुषलाई सहज पनि त छैन नि, म बुझ्छु वहाँको पीडा ।
मलाई थाहा छ मेरो मामु एक चर्चित सेलिब्रेटी हुनहुन्छ । तर मेरो दुर्भाग्य मैले कैले पनि खुलेर वहाको छोरा हुँ भन्न सकिन । न त हिरोइनको छोरा हुनुमा गर्भ गर्न सकें । ठिकै छ वहाँको करियर बन्दै छ चर्चा कमाउनु हुदै छ भनेर मैले पनि खासै गुनासो गरेको थिइन । किनकि म पनि त आफ्नो आमाको प्रगतिको बाधक त कसरी बन्न सक्छु र, एउटा ‘छोरा’ भएर ।
तर आज मेरो मन चुडिएकोको छ, कुडिएको छ । बाबामामुको त्यत्रो लामो सम्बन्ध, माया र त्यहि मायाको चिनो ‘म’ जसको अस्तित्व मामुले आफ्नो स्वार्थका लागि एकै पटकमा निमोठीदिनु भयो । मलाई लाग्थ्यो दुनिया सामु लुकाएर राखे पनि मामुले मलाइ माया त पक्कै गर्नु हुन्छ । तर त्यस्तो पनि रहेन छ ।
उफ्फ़ ! कोहि आमा यति सम्म निर्दाही पनि हुन्छ र ? अझै पनि विश्वास गर्न सकेको छैन । तर के गरौ आफ्नो फाइदाको लागि मेरो मामु, मलाई नौ महिना सम्म कोखमा राखेर जन्माउने मामुले नै मेरो अस्तित्व नकार्नु भयो ।
खैर, मामु म त हजुरलाइ पर्दा र पोस्टरमै हेरेर भए पनि मन बुझाउथे र अझै पनि बुझाउने नै छु । तर प्लिज बरु यस भन्दा पछि मेरा नयाँ नयाँ बाबाहरुसंग बसेर मेरा भाइ बहिनी नजन्माईदिनु होला । किनकी तपाइँमा आफ्नोलाई आफ्नो भन्ने हिम्मत नै छैन । त्यहि कारण म झैँ नस्विकारिएको अस्तित्वमा जिउदो लास बनेर उनीहरु बस्न सक्छन् सक्दैनन् । कुनै समय तपाइँलाइ अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छन् ।
अन्त्यमा आगामी जीवन र सफल भविस्यको शुभकामना मामु !!!
तपाइले अस्तित्व नकारेको छोरो
(यो भावना काल्पनिक हो)
२०७६ साउन ५ गते १२:३० मा प्रकाशित